NextMapping | Igodo nke mkpịsị ugodi: Nduzi nke Mgbanwe Ọchịchị - Ngbanwe Ọsọ N’ụwa N’ụwa Ọsọ
Nduzi nke Onye ndu mgbanwe - Ngbanwe vinggbanye Inwe Ebuba Puru ike
Ntughari mgbanwe ochichi mgbanwe a diri onye obula nihi “Onye ọ bụla bụ onye ndu!”
Changebawanye ngwa ngwa mgbanwe mgbanwe chọrọ omenaala ebe mmadụ niile bụ onye ndu mgbanwe
Onye ọ bụla nọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'oge ihe ọhụrụ na teknụzụ dị ukwuu ma na-emeso mgbanwe ngwa ngwa na-aga n'ihu. Isi ihe bụ otu esi agba ndị mmadụ ume ma mee ka ha bụrụ 'ndị isi mgbanwe' na iwelie mmụba, mmekota na ihe ịga nke ọma maka mmadụ niile nọ na ụlọ ọrụ na maka azụmahịa dum. Ihe okwu a bu n’uche onye ọ bụla nwere ike imebi ikike nke onwe ya iji mee mgbanwe na onye ndu onwe ya n'ụzọ dị mma ma na-arụ ọrụ. Ihe ngbakwasi ukwu a bu Akwụkwọ Cheryl "Nkà nke Mgbanwe Onye Isi" (Wiley 2015)
Enwekwu nghọta banyere otu esi agbanwe ngwa ngwa na-emetụta ọsọ nke ọrụ yana otu anyị onwe anyị dị ka ndị isi si dị mkpa iji wulite mmezu nke eziokwu ọhụrụ
Echiche gbanwerenụ banyere otu anyị n'otu n'otu nwere ike isi mee ka nrụgide dị mma na oge na-arụ ọrụ na gburugburu ọrụ ọrụ ngwa ngwa
Nghọta doro anya nke otu ọgbọ si ele ihe anya na-agbanwe, na-eleba anya na mgbanwe na atụmatụ iji mezi mmeghachi omume mgbanwe na omume
Usoro mgbanwe na otu esi eji ihe nlereanya a na-eduga mgbanwe maka onwe ya na ndị ọzọ
Ghọta n'omume mgbanwe onwe ha na akụrụngwa iji bulie ikike ha nwere imeghari ọsọ ọsọ na mgbanwe na-aga n'ihu na usoro dị mma
Ngwaọrụ iji mee ka mgbanwe gaa n'ọtụtụ echiche tinyere ọgụgụ isi, ọgụgụ isi na ọgụgụ isi
Udu mgbanwe, ‘map nke ozo’ nke g’edeputa ihe nile nke ime n’iru okike nke ichoro imeputa
Cheryl bụ onye na-ekwu okwu mmalite mkpị maka ọzụzụ Onye Isi Ọchịchị nke AGA kwa afọ ma ọ bụ ihe ịtụnanya!
Akpọrọ isi okwu ya, "The Art of Change Leadership - How to Flex in Flux" na ozi ya bịara n'ezi oge ma baa ezigbo uru nye ndị sonyere anyị. Anyị nwetara nzaghachi dị mma sitere n'aka otu anyị gbasara ụdị izipu Cheryl, ntuli aka na mmekọrịta Q&A, yana nyocha ọ zigara ndị sonyere iji mata ndị na-ege ya ntị ma hazie ihe ngosi ya. Isi okwu mmalite nke Cheryl ji nnukwu ume wee malite ọgbakọ anyị - anyị hụrụ vidiyo na egwu ndị mere ka mmadụ niile nwee ọ excitedụ ụbọchị niile. ”
J. Bruce / Director nke Nzukọ
Mkpakọrịta nke ndị na-aza ajụjụ gọọmentị